Adobe Flash Player ka emelitere ọzọ n'ihi enweghị nsogbu | Esi m mac
Adobe Flash Player na-emelitekwa ọzọ n'ihi enweghị ike
Ha anaghị ahapụ otu nke ha batara na nke ọzọ ... Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-aga n'ihu na-eji Flash Player na Mac (yana PC), egbula oge na mmelite kachasị ọhụrụ nke anyị nwere na netwọkụ, ebe nke a na-agbazi nsogbu nchekwa siri ike.
Ahụhụ dị na ụdị nke ugbu a na ọ bụghị ogologo oge gara aga ka emelitere -nke March 11- na ọ bịakwara dozie nsogbu nchekwa, ihe a na-emegharị ugboro ugboro na ọ bụ ya mere anyị ji agba gị ume ka ị wụnye ụdị ọhụụ a ozugbo enwere ike , dị ka ịnwa ịchebe obere oge.
Ma n'ezie, maka ụdị ọhụụ a, nsogbu nchekwa na-apụtakwa ma ọ ga n'ihu ruo mgbe ọ ga - abụrịrị ihe fọdụrụnụ na kọmpụta dị ugbu a. Ma na-ahapụ esemokwu nke ma ma ọ bụ iji wụnye ngwá ọrụ na Mac, ikwu na nke a nche oghom nke na-emetụta ndị ọhụrụ version nke Flash Player na-enye ndị ọzọ ohere ịnweta data anyị ma gbochie ịnweta anyị.
Imelite ma ọ bụ iwepu ngwá ọrụ sitere na otu anyị bụ ihe dịịrị onye ọ bụla, mana ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ afọ gara aga iji Adobe Flash Player bụ ihe dị mkpa iji sọfụ ụgbụ ahụ, taa ọ bụkwaghị. ma ọ bụ iji nọgide na Flash arụnyere na Mac ma ọ bụrụ na ị kpebie ịga n'ihu ọ kachasị mma ka ị melite ozugbo enwere ike site na nwere weebụsaịtị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Adobe Flash Player na-emelitekwa ọzọ n'ihi enweghị ike
Asụsụ mmemme ọhụrụ nke Apple, Swift, nwere ike ịbịa Android dika Google si kwuo